दुर्गा माताकाे दर्शन गर्दै एक एक शेयर गरेर राशीफल पढ्नुस, यही महिनाभित्र तपाईकाे मनाेकामना पुरा हुने छ ! – ताजा समाचार
दुर्गा माताकाे दर्शन गर्दै एक एक शेयर गरेर राशीफल पढ्नुस, यही महिनाभित्र तपाईकाे मनाेकामना पुरा हुने छ !
वृष यो महिनामा मिश्रित फल मिल्नेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि केहि संघर्श गर्नु पर्नेछ । घर परिवारमा झै–झमेलाको अवस्था आउला । नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ । महिनाको उत्तरार्ध बाट ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । वाक्चतुर्याईँले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,४ र शुभ रङ्ग हल्का पहेंलो वा रातो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महाकालीजीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।